Ungalikhetha Kanjani Igama Lesizinda Ebhizinisini Lakho | Martech Zone
Kuyathakazelisa ukucabanga emuva lapho ngangivame ukuthenga amagama wesizinda ngaso sonke isikhathi (ngaze ngathengisa elilodwa kanye!) Nokuthi nginquma kanjani ukuthi ngangizokuthenga ini. Sisanda kuqala ibhizinisi elisha I-CircuPress futhi angikaze ngiyibize ngegama le nkampani size siqiniseke ukuthi singathenga igama layo lesizinda! Ngicabanga ukuthi izikhathi ziyashintsha.
Uma kuziwa ekukhetheni igama lesizinda, ukushaya ibhalansi phakathi kwalezi zinto ezibucayi-ukulula, ukukhumbula, ukuhambisana-kuyisihluthulelo sokubamba umbani ongaphumeleli webhodlela lakho eliku-inthanethi.
Ngikholwa ukuthi izinto ezithile zisabalwa… odwi basabonakala njengogaxekile futhi amagama amade kufanele agwenywe ngempela. Futhi, ngokuqapha ukuthi awunazo izipelingi eziyishwa ngaphakathi kwesizinda… njenge IT Scrap at itscrap.com, kufanele kugwenywe. WhoIsHushHomeSour.com hlanganisa lo mhlahlandlela omuhle ukukusiza ukhethe igama lakho lesizinda elilandelayo!
Tags: Ukufaka uphawuigama lebhizinisikhetha igama lesizindaigama lesizindaamagama wesizindathola igama lesizindakhobethanhweb.com
Izimfihlo Zesithupha Zokuqukethwe Okuthelelanayo